GNOME လက်မှတ် - GNOME အတွက်လျှောက်လွှာများနှင့်စာကြည့်တိုက်များစီမံကိန်း Linux မှ
ယနေ့အထောက်အကူပြုရန်ဆက်လက်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် massification ၏မရေမတွက်နိုင်သောအသုံးဝင်သောစီမံကိန်းများ၏ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linux ရှိပြီးသား, ငါတို့ခေါ်တ ဦး တည်းအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ် « GNOME Circle».
ဘယ်ဟာအခြေခံအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတန်ဖိုးရှိသောစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည် "GNOME" အဝန်းသင်၏တိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက် applications များနှင့်စာကြည့်တိုက်များ၏ဂေဟစနစ်ကိုယ်ပိုင်နှင့်တတိယပါတီဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အက်ပလီကေးရှင်းများ
ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုမိုသိရှိလိုပါကသူတို့၏ဗဟုသုတကိုတိုးချဲ့လိုသောသူများအတွက် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း application ကိုစီမံကိန်းများကိုလူတိုင်းအတွက်အသုံး ၀ င်သော၊ အောက်ပါယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
"လွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောလုပ်ငန်းသုံး GNU / Linux ကဲ့သို့ကြီးမား။ ကြီးထွားလာသော၊ အကျိုးရှိစွာနှင့်ထိရောက်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အတူအခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော Operating Systems များအသုံးပြုခြင်းသည်၊ Distros နှင့် Apps များကိုမည်သည့်အရာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်များအတွက်အိုင်တီဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။" Linux တွင်အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အက်ပ်များ
1 GNOME Circle: GNOME ဂေဟစနစ်ကိုတိုးချဲ့ခြင်း
1.1 GNOME Circle ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 GNOME App Developers များအတွက် GNOME CIRCLE ၏အကျိုးကျေးဇူးများကဘာတွေလဲ။
1.3 GNOME CIRCLE ကိုလျှောက်ထားရန် developer တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်ဘာလိုအပ်ပါသလဲ။
1.4 ယခုအချိန်အထိ GNOME CIRCLE သို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည်
GNOME Circle: GNOME ဂေဟစနစ်ကိုတိုးချဲ့ခြင်း
GNOME Circle ဆိုတာဘာလဲ။
အဆိုပါအညီ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဒီ၏ GNOME အသိုင်းအဝိုင်းကနှင့်အဘို့တီထွင်စီမံကိန်း၎င်းကိုသတ်မှတ်သည် -
"GNOME Desktop ပတ်ဝန်းကျင်ဂေဟစနစ်ကိုတိုးချဲ့ရန်အတွက် application များနှင့်စာကြည့်တိုက်များ၏တိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုတိုးတက်စေရန်ရှာသောစီမံကိန်း။ ထို့ကြောင့် GNOME CIRCLE သည် GNOME ပလက်ဖောင်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ရရှိနိုင်သည့်ကောင်းသော software ကိုဆိုလိုသည်။ GNOME အတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်စာကြည့်တိုက်များသာမက GNOME နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ လွတ်လပ်သော developer များကိုလည်းထောက်ပံ့ရန်လည်းကြိုးပမ်းသည်။"
GNOME App Developers များအတွက် GNOME CIRCLE ၏အကျိုးကျေးဇူးများကဘာတွေလဲ။
"GNOME ပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏စီမံကိန်းများကို GNOME Circle တွင်ထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။"
Circle's GitLab အုပ်စုတွင်ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။
အီးမေးလ်နာမည်ပြောင်ကိုသုံးပါ «@gnome.org», အပေါ်တည်ခင်းhostည်ဘလော့ဂ် «https://blogs.gnome.org»နှင့်တစ် ဦး ကို web အာကာသ «https://people.gnome.org».
ဝဘ်ပေါ်တွင်ပါဝင်ရန် GNOME ဂြိုလ်.
ဝန်ဆောင်မှုထဲမှာအကောင့်တစ်ခုရှိပါသလား «GNOME Cloud» နှင့် «meet.gnome.org».
GANDI - ဒိုမိန်းနှင့် Hosting ပံ့ပိုးသူရှိ E-Rate လျှော့စျေးကိုရယူပါ။
GNOME CIRCLE ကိုလျှောက်ထားရန် developer တစ်ယောက်အနေဖြင့်သင်ဘာလိုအပ်ပါသလဲ။
စီမံကိန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ «GNOME CIRCLE» စီမံကိန်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်အတွက် developer များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ရမည် -
မိတ်ဖက်လိုင်စင်သဘောတူညီချက် (CLA) မရှိပါ။
အထူးသဖြင့် applications များအကြောင်းအောက်ပါတို့နှင့်ကိုက်ညီရန်တောင်းဆိုပါ။
GTK အပါအဝင် GNOME ပလက်ဖောင်းကိုသုံးပါ။
၎င်းတို့ကို Flatpak အဖြစ်တပ်ဆင်ရန်ရရှိနိုင်သည်။
သူတို့က application အိုင်ကွန်ရှိပြီးဆော့ဖ်ဝဲ application ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ screenshots တွေပါတဲ့ GNOME Desktop နဲ့ကောင်းကောင်းပေါင်းစပ်ထားတယ်။
ယေဘူယျအားဖြင့် GNOME ကွန်ဗင်းရှင်းများကိုလိုက်နာသောကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုထားသောအသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ရှိထားပါ။
GNOME ပလက်ဖောင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့် glib-based applications တိုးချဲ့ပါ။
GNOME coding လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာပါ။
၎င်းတို့ကိုအနည်းဆုံးအခြားစီမံကိန်းတစ်ခုသို့မဟုတ် application တစ်ခုဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ စာရွက်စာတမ်းအချို့ (အနည်းဆုံး API ရည်ညွှန်းစာရွက်စာတမ်းများ) ကိုပေးပါ။
ယခုအချိန်အထိ GNOME CIRCLE သို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည်
ယခုတိုင်အောင်သူတို့ကိုရေတွက်နိုင်သည် ၂၉ ခုနှင့်စာကြည့်တိုက် ၄ ခု၊ ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာ «GNOME CIRCLE»အောက်ပါတို့ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်သည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «GNOME CIRCLE»၎င်းမှဖန်တီးထားသောစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတန်ဖိုးရှိသောစီမံကိန်းတစ်ခု "GNOME" အဝန်းသင်၏တိုးချဲ့နိုင်ရန်အတွက် applications များနှင့်စာကြည့်တိုက်များ၏ဂေဟစနစ်ကိုယ်ပိုင်နှင့်တတိယပါတီဖြစ်ထွန်းမှုများ၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » GNOME CIRCLE - GNOME အတွက်လျှောက်လွှာများနှင့်စာကြည့်တိုက်များစီမံကိန်း